FBI-da Mareykanka oo baadi goobeysa Axmed Gurey | KEYDMEDIA ENGLISH
FBI-da Mareykanka oo baadi goobeysa Axmed Gurey
FBI-da Mareykanka, ayaa dalbaneysa in gacan laga siiyo qabashada, nin u dhashay Siiriya, heystana dhalashada Mareykanka, kaas oo ka barbar dagaallada Kooxda xiriirka la leh Al-qaacida ee Al-Shabaab.
WASHINGTON - Dowladda Mareykanka ayaa lacag dhan 5-milyan oo doollarka Mareykanka ah, u ballan qaadday in ay siineyso, ciddii keenta xog ku saabsan halka uu ku sugan yahay, Jehad Serwan Mostafa, oo ah mid ka mid ah, kuwa loogu doon-doonista badan yahay, hoggaamiyayaasha Kooxda Al-Shabaab.
Jehad Serwan Mostafa, oo Kooxda dhexdeeda looga yaqaan magacyo kala duwan, sida; Emiir Anwar, Axmed Gurey, Anwar Al-Amriiki, Axmed, Anwar, iyo Abu Abdullah Al-Muhajir, ayaa lagu eedeeyay inu qeyb lixaad leh ka qaato hoggaaminta howlgallada Al-Shabaab ee ka dhanka ah Bulshada Soomaaliya.
Sida lagu sheegay ogeysiis ay daabacday, Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Serwan Mostafa, wuxuu sidoo kale, Al-Shabaab, ka saacidaa tababarka ciidanka, maadaama uu kulliyad ku taalla magaalada San Diego ee gobolka California, ku qaatay casharro la xariira agaasinka weerrada 15 sano ka hore.
Eedeysanaha oo 41-jir ah, ayaa mar soo noqday, madaxa golaha dhalinyarada muslimiinta ee San Diego, hayeeshee, wuxuu hadda ku jiraa “Liiska Argagaxisada loogu doonista badan yahay” ee FBI-du baacsaneyso, maadaama uu yahay muwaadinka ugu darajada sareeya ee u dhashay Mareykanka ee u dagaallama Urur Argagixiso.
2005, isagoo afar iyo labaatan jir ah, Mostafa wuxuu u safray Yemen, ka hor inta uusan u soo gudbin Soomaaliya, halkaasoo uu kaga biiray Al-Shabaab, wuxuuna Kooxda ka caawiyaa sameynta walxaha qarxa, dacaayaadaha warbaahinta, tababarka ciidanka, turjumidda luuqado kala duwan iyo isku xirka ajaanibta.
Mostafa ayaa la rumeysan yahay inuu leeyahay saddex xaas iyo ku dhawaad 20 caruur ah, waxaana la sheegaa in inta badan qoysaskiisu, ku noolyihiin Jubbada Dhexe, maadama uu yahay mid ka mid ah dagaalyahannada ajnabiga ah ee aadka loogu kalsoon yahay, wuxuu helaa ilaalo dheeraad ah (marka loo eego kuwa kale).
Wuxuu ku dhashay Waukesha, Wisconsin, kuna koray aagga Serra Mesa ee San Diego, Calif., Mostafa waxa uu dhigtey Mesa Community College, ka hor inta uusan ka qalin jebin Jaamacadda California, San Diego 2005, wuxuuna haysta marqaatiga koobaad ee dhaqaalaha [Economicis].